သက်ကြီးရွယ်အိုများခိုကိုးရာ သဘာဝရိပ်သာအတွက် အလှုတော်ဒါန | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သက်ကြီးရွယ်အိုများခိုကိုးရာ သဘာဝရိပ်သာအတွက် အလှုတော်ဒါန
သက်ကြီးရွယ်အိုများခိုကိုးရာ သဘာဝရိပ်သာအတွက် အလှုတော်ဒါန
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Oct 30, 2014 in Community & Society, Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 136 comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျား… ဦးကျောက်ခဲလည်း သက်ကြီးရွယ်အို ခိုကိုးရာမဲ့တွေအကြောင်း စာကုံးလို့ ခြယ်ပါမယ်ဆိုကာမှ မမျှော်လင့်ဘဲ အရေးပေါ်အလုပ်တွေကပေါ်လာလို့ နောက်ကျ သွားတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ…။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီပို့စ်ကို အောက်ကပို့စ်တွေနဲ့ တွဲဖတ်ပေးပါလို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ…
လူတွေနဲ့ဝေး ဝေး ~~ဝေးတဲ့နယ်မြေ (သဘာဝရိပ်သာ)
လွန်ခဲ့သော ၂-နှစ် အခုလို အောက်တိုဘာလကုန် နိုဝင်ဘာလဆန်း အခါသမယ ၊ ဦးကျောက်ခဲရဲ့ နှမငယ် သမီးဦးလေးဖွားမြင်ဖို့ ဩစီကျွန်းကြီးမှာ မီးနေလာစောင့်တုန်းကပေါ့ ခင်ဗျာ…။
ကမ္ဘာ့တောင်စွန်း ဩစီကျွန်းမှာတော့ ဆောင်းအကုန် နွေအကူးမို့ ရာသီဥတုက အေးမြခြောက်သွေ့နေတုန်းပါပဲ ။ မီးနေစောင့်ဖို့ ခွင့်ရက်ရှည်ယူလာတာမို့ အေးအေးဆေးဆေးနှပ်မယ်လို့ ကြံရွယ်ထားပေမည့် အကျင့်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးအစုံက မနက် ၆-နာရီထိုးရင် နှိုးစက်မလို အော်တိုမစ်တစ်ပွင့်နေတာမို့ အိပ်ရာထဲမှာ စောင်ခြုံကွေးရင်း ဟိုလူးသည်လှိမ့် အတွေးနယ်ချဲ့နေတုန်း… အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးကို တဒုန်းဒုန်း ထုရိုက်သံနဲ့အတူ…
“ဟယ်လို… ဟယ်လို… မီးမီးရေ ငါ့ကို ကယ်ပါဦး… ငါသေရတော့မယ်… ကယ်ကြပါ…” လို့ ကတုန်ကယင် အသံနဲ့ အဖွားအို တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ကနေ အကူအညီတောင်းနေပါတယ် ။
ဦးကျောက်ခဲလည်း အပြေးအလွှား တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘေးခြံက အဖွားအို ဒေါ်ရိုစီပါ ၊ အနှီအဖွားအိုက စကော့တလန်ဇာတိ အသက် ၈၀ ပြည့်လုပါပြီ ။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယခင်ပွန်း ဦးဘရိုင်ယန်က အသက် ၇၀ ၊ လေတခြမ်းဖြတ်ထားလို့ မသန်စွမ်းပါဘူး ။ သူတို့မှာ လက်ထက်ပွား သားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပေမည့် အသက် ၂၅-နှစ် အရွယ်မှာ ကားမှောက်လို့ ဆုံးပါးသွားပါသတဲ့ ။ အဲသည့်တော့ အနှီ အဖွားအိုနဲ့ ဂီလာနအဖိုးအိုဟာ သူတို့ဟာသူတို့ အစိုးရအထောက်အပံ့ သက်ကြီးပင်စင်နဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပါ ။ သူမမှာ ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရှိပေမယ့် ပုံမှန် ဝင်ထွက်သွားလာတာ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး ၊ အဖြူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ခပ်စိမ်းစိမ်းပေါ့ခင်ဗျာ ။ အခုလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာတော့ တခြား အဖြူအိမ်တွေကို အကူအညီမတောင်းရဲလို့ အာရှသား ဦးကျောက်ခဲရဲ့ နှမငယ်လင်မယားကို အကူအညီလာတောင်းရှာတာပါ ။
အဖွားအိုက မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့ “ဆေးရုံကားကို မခေါ်ပါနဲ့ဦး… သူ့သမီးကို အရင်တွေ့ပါရစေ”လို့ တောင်းဆိုတာကြောင့် ဦးကျောက်ခဲနဲ့ ယောက်ဖတော်လည်း အာရှသားပီပီ ဒုက္ခရောက်နေသူကို လစ်လျူမရှူတတ်တာမို့ အဖွားအို ဒေါ်ရိုစီကို ကားပေါ်တင်ပြီး သူ့သမီးအိမ်ကို ချီတက်ကြတာပေါ့ ။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းအထွက် မကိုက်ပါဘူး … သူ့သမီးအိမ်ရောက်တော့ အိပ်ကောင်းနေတုန်း စောစောစီးစီး ဒုက္ခပေးသတဲ့လေ… ။ စေတနာထားပြီး ကူညီတာကို အခုလို အားမနာပ စော်ကားခံရတော့ ဘယ်ရလိမ့်မလဲ … ယောက်ဖတော် ဩစီမှာမွေးတဲ့ အာရှသား ကိုစကားများက ကောင်းကောင်း ကလော်တာပေါ့ခင်ဗျာ ။ အဲသည့်တော့မှ စကားလျှောချ လေသံပျော့သွားပြီး အဖွားအိုကို ဆေးရုံပို့ရပါတော့တယ် ။ သူမမှာ ရောဂါရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ မရှိပါဘူး… အသက်ကြီးလာတော့ စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်တာပါ ။ ဆေးရုံက လူအိုရုံကို ပို့ခိုင်းပေမယ့် ဂီလာန ခင်ပွန်းသည် အဖိုးအို ဦးဘရိုင်ယန်ကို စိတ်မချနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပြန်တာမို့ ၊ လူမှုဖူလုံရေးက အနှီအဖိုးအိုနဲ့ အမယ်အိုကို ပုံမှန် တစ်လ ၂-ကြိမ် ရောဂါစမ်းသပ်ဖို့ လူနာတင်ယာဉ်နဲ့တကွ ဆေးအဖွဲ့ကို လွှတ်ပြီးစောင့်ရှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်လည်း မြို့နယ်ကောင်စီက သူတို့အိမ်မှာ တပ်ဆင်ပေးသွားပါသေးတယ် ။ …. အားကျဖွယ် ကောင်းလေစွ ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း အမေရိကားမှာနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးဖူးပါတယ် ။ သူ့အဆိုအရတော့ သားသမီးတွေက မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအဖို့ အဖော်ရအောင် လူအိုရုံ သို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အို ရပ်ကွက်မှာ နေသင့်ပါသတဲ့ ။ သူတို့ မောင်နှမ ၄-ယောက်စလုံးရော မိဘ ၂-ပါးပါ နာမည်ကျော် ဆရာဝန်ကြီးတွေပါ ။ အခု သူတို့မိသားစုအားလုံး အမေရိကားမှာ အခြေချနေထိုင်ပေမယ့် မိဘနှစ်ပါးကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိ မစောင့်ရှောက်နိုင်သလို မိဘတွေကလည်း စကားပြောဖော်မရှိလို့ ပျင်းရှာပါသတဲ့ ။ အဲဒါကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အို ပင်စင်စားတွေ စုပြီးနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ မိဘတွေအတွက် အိမ်ဝယ်ပြီး ထောက်ပံ့ထားပေးပါသတဲ့ ။ သူတို့က အမေရိကန် စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ တတ်နိုင်သရွေ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားတာ သာဓု ခေါ်ရုံကလွဲလို့ ထောက်ပြဝေဖန်စရာ မရှိပါဘူး ။ ဒီနေရာမှာ အလျင်းသင့်လို့ပြောရရင် ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ချစ်အကိုတော် သွားလေသူ “ဘလော်ဂါ ကိုကြီးကျောက်” ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့များမှာ အမေရိကန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ ။
ရေးလက်စမို့ နိစ္စဓူဝ မြင်နေရတဲ့ စင်္ကာပူနဲ့ ဟောင်ကောင်က သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြောင်းလည်း ဖောက်သည်ချပါရစေဦး ။
အရွယ်ရှိခိုက် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတိုင်းရဲ့ ဝင်ငွေကနေ စင်္ကာပူမှာ CPF (Central Provident Fund) နဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ MPF (Mandatory Provident Fund) ဆိုပြီး လစဉ် အချိုးကျ ကောက်ခံပါတယ် ။ မြန်မာလို အလွယ်ပြောရရင်တော့ ပင်စင်စုဆောင်းငွေပေါ့ခင်ဗျာ ။ အဲသည့် ငွေတွေကို အသက် ၆၅-နှစ်ကျော်သွားရင် အစိုးရက လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ် ။ အကြောင်း တစ်စုံတရာကြောင့် အနိစ္စသဘော ကိစ္စချောသွားရင်လည်း ကျန်ရစ်သူ အမွေဆိုင်တွေ အတွက်ပေါ့ ။ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ သာမန်လူတန်းစားတွေအဖို့ လင်ရော မယားရော အရွယ်ရောက်သားသမီးတွေပါ အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ် ။ အဲသည့်တော့ မိဘတွေ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာရင် အခပေး ဘိုးဘွားရိပ်သာ လူအိုရုံတွေကို ပို့ထားပြီး ၊ အလုပ်နားရက်တွေရောက်မှ သွားတွေ့ကြတာ ထုံးစံလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ ။ အဲဒါတောင်မှ လမ်းဘေးမှာ အမှိုက်ပုံးတွေထဲက ဗူးခွံနဲ့ စက္ကူတွေ လိုက်ကောက်နေတဲ့ တုန်တုန်ချိချိ တစ်ကောင်ကြွက် အဖိုးအို အဖွားအိုတွေကို ရင်နာစဖွယ် မြင်တွေ့ရတုန်းပါ ။
စင်္ကာပူနဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေကို ပုဂ္ဂလိက လူမှုဝန်ထမ်း ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက တည်ထောင်ကြပါတယ် ။ လုပ်သားတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဖိလစ်ပင်းန် ၊ မြန်မာ ၊ အင်ဒိုနီးရှန်း နဲ့ တမီလ်တွေပါ ။ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ့်အဆွေလည်းမဟုတ် ၊ ငွေကြေးလစာအတွက်ပဲဆိုတော့ အလုပ်သမားတွေက စေတနာမပါတာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒီလိုပဲ တွန်းတွန်းထိုးထိုးနဲ့ပါ ။ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအိုရုံရောက်ရင် ဘုရားရှိခိုးရမယ် ၊ ခရစ်ယာန် လူအိုရုံဆိုရင် ဓမ္မတေးဆိုရမယ် ၊ အစ္စလာမ် လူအိုရုံဆို နေ့စဉ် နမာရ်း ၅-ခါဖတ်ရမယ် ၊ ဟိန္နူ လူအိုရုံဆို ဂါထာတွေရွတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ ။ သူ့ဋ္ဌာနမှာ သူ့စည်းကမ်းမို့ အပြစ်မဆိုသာပါဘူး ။ အဲသည့်လို မရွတ်မဖတ်ချင်လို့ ပျော်သလို နေကြတဲ့ ဘိုးဘွားတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နေရပါတယ် ။ သူတို့ကို လစဉ်ထောက်ပံကြေးထုတ်ပေးတဲ့ လဆန်းရက်တွေဆိုရင် မီးနီရပ်ကွက်တွေမှာ ဖွဲတစ်ဆုပ်တင်မက ဘီယာဗူးတောင်နိုင်သေးလို့ လမ်းသလားနေတဲ့ စီနီယာ စီတီဇင် “အန်ကယ်ကြီး” များကို တွေ့ရသလို တိုက်အောက်မှာ ကျားထိုးရင်း ထ နပန်းသတ်ကြတဲ့ အိုကြီးအိုမတွေအကြောင်းကလည်း နားနဲ့မဆန့်အောင်ပါပဲ ။ အဲသည့်လိုပါပဲ ၊ ရထားထဲမှာ ဘတ်စ်ကားထဲမှာ သူတို့ကို နေရာဖယ်မပေးလို့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်ဖြစ်နေတဲ့ “အန်တီကြီး” တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ တရားမရှိ တရားမသိသူတွေ ပေါ့ဗျာ ။
နေရေးထက် သေရေးခက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အကြောင်းလည်း လှည့်ပါရစေ ။ တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ဦးကျောက်ခဲတို့ ရွှေပြည်ကြီးထက်စာရင် နေစားရိတ် စားစရိတ် သက်သာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ယခင်အခါများကတော့ နာမကျန်းဖြစ်ရင် ဆေးဝါးကုသစားရိတ်က အတော်ထောင်းလှတာမို့ ထိုင်းနိုင်ငံသား နင်းပြားတွေအတွက် “သေချင် သေပါစေ ၊ နေမကောင်းတော့ အဖြစ်မခံနိုင်” လို့ ဆိုရိုးစကားတောင် ရှိပါတယ် ။ ဒီအခက်အခဲကို ရှင်းပေးလိုက်သူက ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ပါ ။ ထိုင်းနိုင်ငံသားမှန်ရင် “ဘတ်ငွေ ၃၀” နဲ့ ဆေးကုသနိုင်မည့် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သွားလို့ အောက်ခြေလူတန်းစားက ယနေ့တိုင် သူ့ကို အလွန်ထောက်ခံပါတယ် ။ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ စေတနာရှင်တွေကလည်း ဖောင်ဒေးရှင်းတွေထောင်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် ဓမ္မရိပ်သာ လူအိုရုံတွေ ဆောက်ပေးကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံမှာလည်း ချို့ငဲ့သူအများစုက အိုမင်းမစွမ်းရှိလာရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံရဆဲပါ ။
ဦးကျောက်ခဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေစဉ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ဖောက်သည်ချပါရစေ ။ သတင်းကတော့ အလွန်မွဲတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းက လယ်သမား သူဆင်းရဲ တစ်ယောက် ၊ လူအိုရုံကနေ သူ့အမေအို ဂီလာနကို ပြန်လာခေါ်တဲ့ အဖြစ်ပါ ။ မထူးခြားပေမယ့် ဆန်းတာက သူနဲ့ သူ့မိန်းမကိုယ်တိုင် အမေအို ဂီလာနကို လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့သူတွေပါ ။ သတင်းစာကို သူပြောပြတာက ၊ အဲသည့်အချိန် သူ့မှာ ကောက်ပဲသီးနှံတွေလည်း ရာသီဥတုမကောင်းလို့ ပျက်စီး ၊ အကြွေးတွေက ဝိုင်းဝိုင်းလည် ၊ ဒီကြားထဲ အမေအိုကြီးကလည်း လေဖြတ်နေတာမို့ သူနဲ့ဆက်နေရင် ထမင်းငတ်ပြီး အသက်ဆုံးပါးကိန်းသာ မြင်ပါသတဲ့ ။ သားထောက်သမီးခံရှိတယ်ဆိုရင် မကူညီကြမှာစိုးလို့ သူကိုယ်တိုင် အမေအိုကို စောင်နဲ့ပတ် ၊ လမ်းဘေးမှာ နေရာချပြီး ကယ်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါသတဲ့ ။ မလှမ်းမကမ်း ခြုံကွယ်ကနေ ရင်နာနာနဲ့ အမေအိုကိုလာသယ်ဖို့ စောင့်ကြည့်နေရင်း ဆိုးလှတဲ့ကံကြမ္မာကို ယူကျုံးမရ ဖြစ်ခဲ့ရပါသတဲ့ ။ အခု သူ့မှာ စီးပွားရေး အခြေအနေ ပြန်ကောင်းလာလို့ သူ့အပြစ် သူဝန်ခံရင်း အမေအိုကို ပြန်လာခေါ်တဲ့ သတင်းပါ ။ ဖတ်မိသူတွေတော့ ဘယ်လို ရှိမယ်မသိ… ဦးကျောက်ခဲတော့ အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တမ်း ပြောရရင်တော့ ဦးကျောက်ခဲတို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုဆိုးတာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ ။ အစိုးရပင်စင်ဆိုတာက ၂ပဲ ၆ပြား ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာက ဗလာနထ္ထိ ၊ အသက်ကြီးမှ ရှိစုမဲ့စုလေး ရန်သူမျိုး ၅-ပါးနှိပ်စက်ရင် ဘာအာမခံချက်မှမရှိ ၊ လမ်းဘေးမှာ ခွက်ဆွဲရကိန်းပါ ။ သတင်းစာထဲမှာ ကျောင်းဆရာအိုကြီးတွေ နေစရာနဲ့ လခသာပေးပါ ခြံစောင့်ဒရဝမ်လုပ်ပါရစေ ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတွေ ၊ လမ်းဘေးမှာ အဟာရပြတ်ပြီး ခန္ဓာစဲသွားတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ခိုကိုးရာမဲ့တွေ ၊ ဆေးရုံတွေမှာ လူနာရှင်က စွန့်ပစ်သွားတဲ့ သတင်းတွေဖတ်ရတိုင်း နှလုံးသားထဲမှာ အတော်ဆို့နင့်ကြေကွဲလှပါတယ် ။ ဟိုတလောဆီက ပင်စင်စား မောင်နှမရဲ့ အဖြစ်ဆိုးမှာဆိုရင် အကိုကြီးဖြစ်သူက လေသင်တုန်းဖြတ်ပြီးသေနေတာ ၄-ရက်လောက်ရှိနေပြီး ၊ လေဖြတ်နေတဲ့ နှမက မကူနိုင်မကယ်နိုင် အိပ်ရာပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ သေအံ့မူးမူးဖြစ်နေတာ အရပ်က သိသွားမှ အချိန်မီလေး သဘာဝရိပ်သာကို ပို့လိုက်ရပါသတဲ့ ။
စာရှုသူတို့ ဦးကျောက်ခဲတို့လည်း သဘာဝတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်တာမို့ တနေ့ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်ကြရဦးမှာပါ ။ အခုအချိန် အဆင်ပြေချင် ပြေပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှ ရန်သူမျိုး ၅-ပါးနှိပ်စက်လို့ဖြစ်စေ ၊ ကုသိုလ်ကြမ္မာငင်လို့ဖြစ်စေ ဘယ်လိုဘဝကို အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ တင်ကြိုမပြောနိုင်ပါဘူး ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက် အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ် ၊ အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ငြင်းခုံနေမည့်အစား တစ်စုံတခုတော့ လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဦးကျောက်ခဲတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီကြရင် ၊ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ဂီလာနတွေအတွက် အထိုက်အလျောက် အနေအစား ပြေလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ သံသရာအကျိုးတွေ ကုသိုလ်တွေကို နောက်ထားလို့ နတ်အုံးသီးရွှေချမှာထက်စာရင် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာ လှုရတဲ့အလှုမျိုးက ပိုပြီးပီတိဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ် ။
အဲသည့်ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ပေးနေတာက မြန်မာနိုင်ငံ သန်လျင်မြို့က သဘာဝရိပ်သာပါ ။ အယုတ်အလတ် အမြတ်မရွေး ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဒုက္ခရောက်နေသူမှန်သမျှကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ပြီး စားဝတ်နေမှု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေတွေကို မငြီးမငြူ ပဲ ဒိုင်ခံ ဖြေရှင်းပေးနေတာ ဂီလာနဒုက္ခသည် ၂၅၀၀ နီးနီး ရှိပါတယ် ။ နေ့စဉ် စားရေးသောက်ရေးအတွက် အခက်အခဲတွေအပြင် ၊ အမိုးအကာ မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိနေပါသေးတယ် ။ တတ်နိုင်သလောက် ဓနိမိုး ထရံကာ မြေစိုက်တဲကြီးတွေနဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို ထားရပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင် မသင့်လျော်လှသလို ၊ ကူးစက်ရောဂါလိုမျိုးသာ ဖြစ်ပွါးခဲ့ရင် ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာသလိုဖြစ်မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါဘူး ။ ဒီကြားထဲ ရင်နင့်စရာကောင်းလှတာက မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင် ဂီလာနဒုက္ခသည် အဘိုးအဘွားတွေကို အတင့်ရဲလှတဲ့ မြေကြွက်ကြီးတွေက ဝင်ကိုက်တာပါပဲ ။ အဲဒါကြောင့် သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး ကြွက်လုံအဆောင်တွေ အပြေးအလွှားတည်ဆောက်ရပါတော့တယ် ။ အစိုးရနဲ့ ဘယ်ခရိုနီကမှလည်း မထောက်ပံ့ ၊ ဘယ်အရပ်ကိုမှလည်း အလှုခံမထွက်တာမို့ အခက်အခဲများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမှာ အသေအချာပါ ။
ဘဝလမ်းခရီး နေဝင်ချိန်မှာ အကြောင်းမလှခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းလို့ သဘာဝရိပ်သာကို ရောက်နေရရှာတဲ့ အဘိုးအဘွား သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ အကြောင်းကတော့ ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ ဂဇက်ရွာသူရွာသား ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေက အသိပေးထားတာ အတိုင်းထက်အလွန် ရှိနေပြီမို့ ထပ်ညွှန်းလို့ ရေးစရာ မလိုလောက်အောင်ပါပဲ ။ သည့်ထက်ပို အခြေအနေဆိုးလို့ လမ်းဘေးမှာ ပင်ပန်းကြီးစွာ တောင်းရမ်းစားသောက်နေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရမင်းများရဲ့ စေတနာနဲ့ တာဝန်ယူမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေရင်တော့ သူတို့ လွှတ်တော်မှာ စုံစမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့လို့မပြီးခင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဒုက္ခဝဋ်ဆင်းရဲနဲ့ အနိစ္စရောက်ဖို့ပဲမြင်တာမို့ ကျနော်တို့ကပဲ လူစိတ်မွေးပြီး လုပ်အားပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေအားပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီနိုင်တဲ့ဘက်က အလှုဒါနပြု ကူညီကြပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျ ။ တကယ်လို့များ ဘာဖြစ်လို့ သဘာဝရိပ်သာကို ရွေးတာလဲလို့ အမေးရှိလာရင်တော့ ဖြေပါရစေ ၊ ဒီလောက်အဆင်ပြေအောင် ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မမြင်မိသေးသလို ဘာသာစွဲမရှိတဲ့ ဦးကျောက်ခဲလိုလူတောင် ဦးစီးဦးဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ရဲ့ သီလ သိက္ခာ သမာဓိကို ယုံကြည်လို့ပါ ။
ဒီနေရာမှာ ဦးကျောက်ခဲ အလှုပြုချင်ပုံလေးကို အသိပေးပါရစေ ။ ဒီလူကြီး စိတ်မပြတ်လေခြင်းလို့ ဆိုချင်ဆိုပါ… အများသူငှာလှုကြသလို “နိဗ္ဗာန်နဿ ပစ္စယော ဟောတု” ဆိုပြီး နဝကမ္မ ဝထ္ထူငွေကို လိုရာကိုသုံးစေဖို့ ဘုန်းတော်ကြီးလက်ထဲ ဝကွက်အပ်တဲ့အလုပ် မလုပ်ချင်ပါဘူး ။ ဒီအဆောင် ဒီအခန်းတွက် ကျနော်များ “မြန်မာ့ဂဇက်အဖွဲ့သားများနဲ့ အများကောင်းမှု” ဆိုပြီး ကမ္မည်းထိုးပြီး လှုချင်တာပါ ။ အဲဒါမှပဲ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကို အကောင်အထည်မြင်ရလို့ မုဒိတာလည်းပွား ၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်း သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်နိုင်ကြမှာပေါ့ ခင်ဗျာ ။
ဘိုလိုတွက်ရင်တော့ ၇-ရက် ၊ ဗမာလိုတွက်ရင်တော့ ရာဟုဖွားပါ အပါအဝင် ၈-ရက် သားသမီးတွေအားလုံး နည်းများမဆို အလှုဒါနပြုလိုကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့်…
ကိုဆာမိ (ဖုန်း- ၀၉ ၇၃၀၇ ၁၇၉၄)
ကိုအမတ်မင်း (ဖုန်း- ၀၉ ၅၀၈၁ ၉၆၉)
မသဲနုအေး (ဖုန်း – ၀၉ ၄၄၈၅၄ ၇၉၇၀)
မရွှေအိ (ဖုန်း- ၀၉ ၇၃၁၈ ၉၂၆၁)
(မအိကြည်ပြာစိုး – အကောင့်အမှတ် – 0016600100035629 – CB Bank ဆရာစံလမ်းဘဏ်ခွဲ (Saya San Road Branch)
(ပြည်ပမှ လှုဒါန်းလိုပါလျင် u.kyauk.gz@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်)
ကိုမာဃ (ဖုန်း- ၀၉ ၉၇၆၀၀ ၆၂၇၉)
တို့ကို ဆက်သွယ် လှုဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အဘိုးအဘွား သက်ကြီးရွယ်အို ဂီလာန အကူအညီမဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အကျိုးကိုမျှော်ကိုးလို့ ဦးကျောက်ခဲက အလှုခံဖလား ခေါက်လိုက်ပါကြောင်း….
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄-ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီမှာ အလှုငွေကောက်ခံမူ အပြီးသတ်ပြီး ၊ ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ တတိယပတ်မတိုင်မီ သန်လျင် သဘာဝရိပ်သာမှာ လှုဒါန်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ် ။ နေ့စဉ် ကောက်ခံရရှိသမျှ အလှုတော်ငွေကို ယခုပို့စ်မှာပဲ စာရင်းဇယားနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ် ခင်ဗျား…
စဉ် အမည် အလှုတော်ငွေ
ကျပ် US$ SS$
၁ ။ ဂဇက်ရွာသား တစ်ဦး ၂,၀၀၀,၀၀၀
၂ ။ မခိုင်ဇာ ၃၀၀,၀၀၀
၃ ။ ကိုဆောရိုး + ဖြူဖွေး ၂၀၅,၀၀၀ 5$
၄ ။ အန်တီမမ ၁၀၀,၀၀၀
၅ ။ ဝါလေး (စင်္ကာပူ) ၇၈,၀၀၀
၆ ။ ကိုရဲစည် ၁၀၀,၀၀၀
၇ ။ snow smile ၁၀၀,၀၀၀
၈ ။ ဦးဦးပါလေရာ ၁၀၀,၀၀၀
၉ ။ မဝေ ၁၀၀,၀၀၀
၁၀ ။ ကောင်းကင်ပြာ ၁၀၀,၀၀၀
၁၁ ။ ကိုကျော်သိန်းမြင့် ၁၀၀,၀၀၀
၁၂ ။ နန်းတော်ရာသူ ၅၀,၀၀၀
၁၃ ။ ကိုမိုးနှင့် မိသားစု (ယူကေ) ၃၁၅,၀၀၀
၁၄ ။ YUYA MON ၁၀၃,၅၀၀ 100$
၁၅ ။ ချာတူးလန် ၂၀,၀၀၀
၁၆ ။ ဦးကြီးမိုက် ၅၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဂဇက်ရွာသူတစ်ဦး ၁၀၀,၀၀၀
၁၈ ။ အညာတမာ ၃၀,၀၀၀
၁၉။ Lucifer (ခ) KMM ၁၀၀,၀၀၀
၂၀။ ဦးနေးချား ၁၅,၀၀၀
၂၁။ ဘုရင့်နောင် စုပေါင်းဒါန ၁၀၀,၀၀၀
၂၂။ ကိုခင်ခ ၅၀,၆၀၀
၂၃။ ဦးကျော်စိုး + ဒေါ်ခင်နှင်း မိသားစု (မန္တလေး) ၅၀,၀၀၀
၂၄။ စင်္ကာပူမှ သူငယ်ချင်းတစ်စု ၂၇၁,၂၅၀ 350$
၂၅။ အန်ကယ်ကြီး (မန္တလေး) ၃၀,၀၀၀
၂၆။ ကိုရင်မောင် ၅၀,၀၀၀
၂၇။ ကိုပီချိုကြီး ၅၀,၀၀၀
၂၈။ Kim Nyein Chan ၁၀၂,၂၈၉ 100$
၂၉။ သဂျီး ၅,၀၀၀ 5$
၃၀။ မသက်သက်ဦး (china) ၅၀,၀၀၀
၃၁။ ကိုသက်ဌေး (သြဇီ) ၁၀၀,၀၀၀
၃၂။ မရွှေအိ ၂၀,၀၀၀
၃၃။ မနိုဗွီ ၄၂,၀၀၀
၃၅။ ကိုရဲဇင်သန့် + မဆွေသက်ပိုင် ၅၀,၀၀၀
၃၆။ ဦးနိုင်ထွန်းလင်း ၁၀,၀၀၀
၃၇။ ကိုကျော်ထိုက် (mdy) ၁,၀၀၀,၀၀၀
၃၈။ ကို OK Gyi (mdy) ၅၀၀,၀၀၀
၃၉။ ရွာစားကျော် မင်းနန္ဒာ + ရှင်မွေးလွန်း ၅,၀၀၀
၄၀။ ဦးကျောက်ခဲ + နှင်းနှင်း ၅၀၅,၀၁၁
၄၁။ ရွှေကြည် ၃၈,၇၅၀ 50$
၄၂။ ဦးမာဃ (ခေတ္တ လူ့ပြည်) ၂၀,၀၀၀
၄၃။ မချိုချိုဝင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ ၂၃,၀၀၀
၄၄။ တညင်သား ၁၀၀,၀၀၀
၄၅။ ဒိုင်းမွန်းစတား မိသားစု ၂၇၅,၆၀၀
၄၆။ မအိ ၅၀,၀၀၀
၄၇။ မခိုင် ၁၀,၀၀၀
၄၈။ ဦးတင်စိန် + ဒေါ်နီနီလွင် ၅၀,၀၀၀
၄၉။ Black Chaw ၅,၀၀၀
၅၀။ မသဲနုအေး ၁၀၀,၀၀၀
၅၁။ ကိုဆာမိ ၁၀၀,၀၀၀
၅၂။ ဦးအောင်မြင့် + ဒေါ်မြမြ ၃၀,၀၀၀
၅၃။ ဦးအောင်ကြည် + ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း ၂၀,၀၀၀
၅၄။ etone & AKKO ၃၀,၀၀၀
၅၅။ WOW ၁၀,၀၀၀
၅၆။ မောင်ဘလှိုင် ၃၀,၀၀၀
၅၇။ အင်ဇာဂီ ၁၀,၀၀၀
၅၈။ hmee ၂၀,၀၀၀
၅၉။ ကိုနိုဇိုမိ ၂၀,၀၀၀
၆၀။ မသဲနုအေး ၁၀,၀၀၀
မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟ ၊ နီးစပ်ရာများသို့လည်း ယခုပို့စ်ကို ဝေမျှနိုင်ပါသည်……
ဦး ကျောက်ခဲ has written 55 post in this Website..
View all posts by ဦးကျောက်ခဲ →
Lucifer (ခ) KMM မှ ယနေ့ညနေတွင် သဘာဝရိပ်သာ အလှူအတွက်
အလှူတော်ငွေ 100000 (ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ) ထည့်ဝင်လှူတန်းသွားပါကြောင်းဗျို့ ………
သာဓု… သာဓု… သာဓုပါ Lucifer (ခ) KMM ခင်ဗျား…
အလှုအတွက် အကြမ်းဖျင်း စီစဉ်ထားတာကတော့…
ကန်တော်ကြီး ရှန်တီ (ယခင်နေရာ) နံနက်၈နာရီ မှာ ဂဇက်တွေ့ဆုံပွဲ စပါ့မယ်…
ဖတ်ရွေးအကြိုက် ဆုတွေအတွက် နာရီနဲ့ လက်ဆောင် ကံစမ်းမဲတွေ ဖောက်ပါ့မယ်…
ပြီးရင် သဘာဝရိပ်သာ အလှုကို ပွဲလာသူများရဲ့ ကားနဲ့ပဲသွားလှုကြပါမည်….
ကားတွေ မဆန့်ရင် တက်စီ ငှားသွားပါမည်…
သဘာဝရိပ်သာမှာ ဆွမ်းမကပ်တော့ဘဲ အဆောက်အဦတွက်သာ ငွေလှုပါမည်ခင်ဗျား…
တွေ့ဆုံပွဲအစီအစဉ်က ၊ နေရာပြောင်းလိုက်ပါတယ်…
နေ့ရက်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ( ၁၁) ရက်
အချိန် ။ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၂) နာရီ
နေရာ။ စိမ်းလမ်းစိုပြေစားသောက်ဆိုင်၊ အင်းယားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yae Myae Tha Ninn says:
ဒီတပတ် စနေနေ့ (၁၃.၁၂.၁၄) သဘာဝရိပ်သာမှာ သွားလှူဖို့ ယာယီ ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်… ကျွန်တော်တို့ ပရီမီယာ ကော်ဖီကနေ မုန့် နဲ့ ကော်ဖီ တိုက်တဲ့ အလှူကလေး သွားလုပ်ပါမယ်… သူငယ်ချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများ လိုက်ပါပြီး လုပ်အား အလှူ လုပ်ချင်ရင် လာခဲ့ပါလား… ပထမက ပါကင် ၅၂ ဆိုတော့ မလောက်လို့ စိတ်ညစ်နေတာ… ဒါနဲ့ ထပ်ကြိုးစားလိုက်တာ… တရုံးလုံးနီးပါး စိတ်ပါလာတော့ လှူဖို့ အထမြောက်သွားတယ်… မုန့်ချည်းပဲ ၁၀ သိန်းဖိုးလောက် မှန်းထားပါတယ်… ကော်ဖီကတော့ လက်ရှိ ၅၂ ပါကင်… ထပ်လဲ အလှူခံထားပါသေးတယ်… အဆင်ပြေရင် အားလုံး လောက်င ပါပြီ… သွားပြီးရင် ဓာတ်ပုံတွေ ထပ်တင်ပါဦးမယ်…
မန္တလေးမှ ဦးကျော်စိုး + ဒေါ်ခင်နှင်း မိသားစုက ငါးသောင်းကျပ် ပါဝင်လှူဒါန်းသွားပါကြောင်း…..
အခုပဲ ပြန်ရောက်တာပါဗျား… သဘာဝရိပ်သာကနေ… နေရာ အစိတော့ မရောက်ပေမယ့် ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မုန့်တွေ လှူခဲ့ပါတယ်ဗျာ… အားလုံး ငွေသားတန်ဖိုးနဲ့ဆို ၃၅ သိန်းဖိုး.. မုန့်တွေ ၄ မျိုးလောက်ပါမယ်.. အိတ်တွေနဲ့ ပြန်ထုပ်ပြီး လှူခဲ့တာပါ… လူ အယောက် ၂၀၀၀ စာလုံးပေါ့.. ကျန်တာကို ဆရာတော်ကျောင်းမှာပဲ ထားခဲ့လိုက်တယ်… ဘောက်ကားတစီး အပြည့်ပါ… ကျောင်းမှာထားခဲ့တာဆို နောက်ဖေးခန်း အပြည့်နီးပါးပါပဲ… သာဓုခေါ်နိုင်ကြဖို့ပါ… ရသမျှ ကုသိုလ်တွေကို အမျှပေးပါတယ်ဗျာ… အမျှ… အမျှ… အမျှ… ယူတော်မူကြပါ….
သာဓုပါဗျာာ သာဓု သာဓု
မနက်က အဲ့အလှူတော် ကားကြီး တွေ့ကတည်းက ရင်ထဲ ပီတိဖြစ်နေတာ
လူစိ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျဆို ၂ ရက်လောက်လှူရမှာ… လုပ်အားဒါနပေးနေကြတာလဲ ကလေးတွေချည်းပဲ… တကယ်ကို ပီတိဖြစ်မိတယ်…
သာဓု သာဓု သာဓုပါ။။
ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်းကို ရောက်လာပြီမို့ မလှုလိုက်မိ မဖြစ်ရလေအောင်…
အလှုခံဖလားကြီး ထပ်ခေါက်ပါတယ်… ဂလောက်… ဂလောက်… ဂလောက်
၅ဒေါ်လာ ကတိပေးထားတာလေး.. ထည့်ပေးပါခင်ဗျ..
အနော်က ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ပမာဏပြောပါမယ်… ရုံးမှာ အလှူ ခံဦးမှာကိုး…
ယနေ့ မန္တလေးမှ အန်ကယ်ကြီးက သုံးသောင်းကျပ် ပါဝင်လှူဒါန်းသွားပါကြောင်းး
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ခင်ဗျာ
ကိုရဲစည်… အလှူတော်ငွေ ကျပ် တစ်သိန်းပါခင်ဗျ…
သာဓု… သာဓု… သာဓု…
စိနတိုင်းက အကိုတော် ကိုရင်မောင်က အလှူတော်ငွေ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်…
ချစ်မိတ်ဆွေ ကိုချိုကြီး P. Cho Gyi က အလှူတော်ငွေ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်…
မသဲ မိတ်ဆွေ Kim Nyain Chan က US$ 100. လှုဒါန်းပါတယ်
သာဓု… သာဓု… သာဓု…ပါ ခင်ဗျား
အောက်ထပ်တာဝန်ယူလိုက်ဖို့ အကျိုးတော်ဆောင်များက တိုက်တွန်းပါတယ် ခင်ဗျ…
“မြန်မာ့ဂဇက်အဖွဲ့သားများနှင့် အများကောင်းမှု” လို့ ကဗျည်းထိုးချင်ပါတယ်…
ကိုဆာမိကတဆင့်ငွေပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ် နောက်ထပ်ကျနော့မိတ်ဆွေ (မသက်သက်ဦး)china ကလဲ၅၀၀၀၀ကျပ်ထည့်ဝင်လှူ ဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါခင်ဗျား
ကိုသက်ဌေး (ဩဇီ) က အလှူတော်ငွေ ကျပ် တစ်သိန်း ပါခင်ဗျ…
မရွှေအိက အလှူတော်ငွေ ကျပ် ၂၀,၀၀၀ ဒါနပြုပါတယ် ခင်ဗျ…
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါခင်ဗျား…
ကိုကိုကျောက် ….. “၄,၄၅၈,၀၀၀” ကျပ်ဆိုတော့ “၄,၅၀၀,၀၀၀”ကျပ်ဖြစ်သွားအောင်
အံစာတုံး + လုံမ​လေးမွန်​မွန်​ : ၃၀,၀၀၀ ကျပ်​
+ ကို မ​မေ့နဲ့​နော်​.. ဟိ
ကိုရဲဇင်သန့်+မဆွေသက်ပိုင် ၅ သောင်းကျပ်ပါခင်ဗျား… အနော့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ ရောက်ရှိနေပါပြီ… ဦးကျောက် တဆိတ်လောက် စာရင်းမှာ ဖော်ပြပေးပါလား…
ရုံးမှာ လက်ရှိလိုက်ကောက်တာ ၁ သိန်းကျော်နေပါပြီ… အခု ၅ သောင်းအပါအ၀င်ပေါ့… ဒါတောင် ၄ ခန်းပဲ ကောက်ရသေးတယ်… ထပ်ကောက်ပြီး စာရင်းပြပါဦးမယ်… အခုတော့ အဲဒီအကိုအမ စုံတွဲကို တဆိတ်လောက် Update လုပ်ပေးပါနော်…
အစ်ကိုကြီးကိုရင်မောင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်
မသက်သက်ဦး ၅၀၀၀၀ ကျပ် (China)
ဦးနိုင်ထွန်းလင်း ၁၀၀၀၀ ကျပ်လက်ခံရရှိပါသည်ခင်ဗျား
ဦးကျောက်စ် ကျေးဇူးပါ… လက်ရှိ တသိန်းခွဲပါပြီ…
မန်းမှ ရွာသား ကိုကျော်ထိုက်ထံမှ အလှူငွေ ကျပ် ဆယ်သိန်း
Facebook မှ ကို OK Gyi က အလှူငွေ ကျပ်ငါးသိန်း လှူဒါန်းထားပါတယ်
စီးပွားများလည်း ဒီရေအလား တရိပ်ရိပ် တက်ကြပါစေ. ဒီထက်မကလည်း လှူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေသော်ဝ်
ကောင်းလိုက်တာကွာ… ဒါဆို ၆၅ သိန်း ပြည့်တော့မှာပေါ့… ၀မ်းသာလိုက်တာ…
နေပြည်တော်မှ ရွာစားကျော် မင်းနန္ဒာ နဲ့ ရှင်မွေးလွန်း ကလည်း အလှူတော်ငွေ ငါးထောင်ကျပ်ပါ ခင်ဗျာ
နောက်ဆုံးပိတ် စာရင်း… 325600 (သုံးသိန်း၊နှစ်သောင်း၊ငါးထောင်၊ခြောက်ရာ)ကျပ်ပါ…
အလှူ ငွေ ထည့်ဝင်သူစာရင်းကတော့
http://myanmargazette.net/208757 တွင် ရှု ပါလေ…
အားလုံး ကျေးဇူးပါ… Update ဖြစ်သွားပြီပေါ့…
Myat Pearl Phyu says:
အရင် Account အဟောင်းက Password မေ့သွားလို့။
Browser မှာပဲ Remember pw လုပ်ထားတာများတာ။
Reset လုပ်ဖို့ မေးလ်ကလည်း လော့ကျသွားတော့..အခု အကောင့်အသစ်ပဲ ထပ်ဖွင့်လိုက်တော့တယ်။
အော်..လာတာက အလှူကို သာဓုခေါ်ဖို့ပါ..။ ဟီးဟီး။
သာဓု ၊သာဓု၊ သာဓု ပါ။။။
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါ ခင်ဗျား…
ရည်ရွယ်ထားတာထက် ပိုမိုကောက်ခံရရှိတာမို့… အဆောက်အဦးတင်မက အတွင်းပရိဘောဂ…
ကုတင်… အောက်ဆီဂျင်ဗူး… လိုအပ်တာတွေကို ကမ္ဗည်းထိုးပြီး လှူဒါန်းပါမည်… လို့
ခိုကိုးရာမဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကိုပါဝင်လှူတန်းရတဲ့အတွက်အထူးဘဲဝမ်းသာပါတယ် ကမ္မကထဦးဆောင်တဲ့ ကိုကျောက်နှင့်တကွရွာသူားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…….
အားလုံး အဆင်ပြေ ကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
သတင်းဒါ့ပုံလေးများ အတွက် လည်ပင်း ညောင်ရေအိုး ဖြစ်နေပြီ။
ထိပ်ဆုံး က စီးကရက် အလှူရှင် ကြီး တော့ လာမယ်မထင်။
လာလို့ ကတော့ ဝက်ဝက်ကွဲ အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်း နဲ့ နေမှာ။
ကြည့်ရတာ။ သများ တစ်ကောင် ထဲ ရွာထဲ လမ်းသလားပြီး မျှော်နေတာ ထင်ပါ့။
တစ်ခြား စောင့်နေသူ အဖော်လေးများ မရှိကြဘူးလား။
ရှိတာပေါ့ဟဲ့ ဒီမှာလဲကွန်ပြူတာတောင်24နာရီမပိတ်ဘဲထားတာ ဖေးစဘုတ်ကလဲကျော်ဆိုက်နဲ့တောင်ဝင်လို့မရဖြစ်နေပြီသောက်တရုတ်ပြည်မှာပြောပါတယ် ကျော်လို့ရတဲ့နည်းလေးများရှိယင်မစကြပါအုံး…..